MACRON: IHE NA-EME NA SHRINE NA-ANOGIDE NA SHRINE
Previous ỤLO IKPE KPEBIRI IKWADO NA MMALITE EKPERE BUHARI
Next MIRACLE, BBNAIJA ‘UGBORO ABUO’ NWETARA IKIKE PILOT
AKUKO UWA, egwuregwu ozi ọma, Hot News, Ihe, IHE N'EME N'OBODO, Local News, OGE ANULI, UTUTU OMA NU
Onye isi ala France bụ Emmanuel Macron na Tuesday n’abalị mere ka ndị na-ege ntị na Fela Anikulapo Kuti si Africa Shrine chie ọchị, mgbe ọ kwadoro na ‘Ihe na-eme n’ụlọ nsọ ahụ ka na-anọgide na ụlọ nsọ’.
A gwara ya ka ọ hapụ ụfọdụ n’ime ọhụụ ya na ọ bụ onye nlekọta nke Shrine mgbe ọ rụrụ ọrụ na Nigeria na Ụlọ ọrụ Embassy French na 2004.
Na vidio ọzọ nke abalị nke Afrika Shrine na Instagram, e jidere President Macron, ya na onye nnọchiteanya ya, Gọvanọ Akinwunmi Ambode, na-eto na mmemme nke Femi Kuti na ìgwè Positive Force.
MIRACLE, BBNAIJA: UGBORO ABUO NWETARA IKIKE PILOT
Ụfọdụ n’ime ncheta ọnwa isii ya na Lagos ka ọ dabeere na ya mgbe ọ zutere President Muhammadu Buhari na Abuja, gụnyere icheta na ịgare egwu site n’aka Femi Kuti, nwa mbụ nke Fela,
Ma, ọ dị njikere ịla ala ebe nchekwa na Tuesday n’abalị ma tụlee akara egwu na ndị na-ege ntị.
Macron na-agba ndị ntorobịa Naijiria aka itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji gbanwee akụkọ nke mba ahụ.
Macron, mgbe ọ na-akọwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ihe dị mkpa, kwuru na ndị Niger nwere ike ịgbanwe ọdịdị ha tupu nzukọ nke mba.
Onye isi ala France nyere ihe ịma aka na ihe omume a na-akpọ “Celebrate African Culture.”
O kwuru na ọdịnihu nke Africa na ọrụ nke ime ka ya na ndị Africa zuru ike, na-ekwu na ndị na-eto eto nwere ọrụ dị mkpa igwu egwu.
“Africa choro ndi ohuru ohuru nke Afrika ka ha keta oke akuko banyere Afrika n’uwa nile,” ka o kwuru.
Dị ka ya si kwuo, ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa n’ihi na ọ bụ ngwá ọrụ iji gbanwee ọha mmadụ.
Mac kọwara Afrika Shrine dị ka ebe ngosi nke ike, egwu, omenala na oge Fela dị ka onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị chọrọ mgbanwe maka ọha mmadụ.
“Obi dị m ezigbo ụtọ ịnọ ebe a. Ka m chetara gị na ebe a – ụlọ nsọ bụ ebe egwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke dị mkpa iji gbanwee ọha mmadụ.
“Ya mere, m ga agwa ndị ntorobịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị mkpa, tinye aka,” ka o kwuru.
Macron kwukwara na mmalite nke ọdịbendị ọdịnala Afrika 2020 na France.
O kwuru na ihe omume ahụ ga – enyere aka ịmepụta ihu pụrụ iche maka ọdịbendị Africa na Europe.
N’oge gara aga, Gov. Ambode kwuru na ọbịbịa Macron ga-egosi na ọbịbịa ọhụrụ nke France na Lagos State ga-eme ka obodo ahụ bụrụ isi obodo na ntụrụndụ Africa.
Ambode kwuru na ihe omume ahụ gbasara maka ịme ememe Afrika nke bụ ihe dị mma maka France ka ọ chọrọ iji wughachi mmekọrịta ya na Africa.
Akwụkwọ akụkọ bụ News Agency of Nigeria (NAN) na-akọ na ihe omume ahụ nwere ndị mmadụ bịaranụ gụnyere, Dr Peter Obi, onye bụbu gọvanọ Anambra, Chief Olusegun Osoba, onye bụbu gọvanọ Ogun, Prof. Wole Soyinka, Sen. Ben Bruce n’etiti ndị ọzọ.
NDỊ a na-akọ na ihe omume ahụ nyere ohere maka Macron na Ambode iji soro ndị egwu, ndị na-ese ihe, ndị na-emepụta ejiji na ndị na-ese ihe.
AFRIKA SHRINE Ambode ANIKULAPO east entertainment FELA femi france Igbo IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDONEWS ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV KUTI LAGOS latestpost NEW POST news NIGERIA post posts SHRINE